बैशाख २६ विहिवार
नेपाली काङ्ग्रेसको जागरण अभियान अन्र्तगत विहिवार उदयपुरको कटारीमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कटारीमा सम्पन्न कार्यक्रममा कांग्रेस बरिष्ठ नेता एवम पूर्व उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रमुख सहभागिता थियो । बरिष्ठ नेता द्वयले सहिदहरु प्रति फुलमाला र अविर अर्पणगदै कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस उदयपुरको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले गाउ गाउमा विद्यालयको सुविधा, बाटोको सुविधा विजुलीको सुविधा कांग्रेसकै पालामा सुरुवात गरेको बताउनुभयो ।
कांग्रेसले सुरुवात गरेको कामलाई कम्युनिष्टले आफुहरुले गरेको भन्दै गलत प्रचार जनतामा फैलाएको आरोप समेत लगाउनुभयो । त्यस्तै कार्यकर्ताहरुले आफुलाई सुध्रिनु पर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै उहाँले सुध्रिनलाई के गर्नु पर्छ कुन बाटोबाट अगाडी बढदा उचितहुन्छ आफु त्यहि बाटो लाग्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
विशिष्ठ अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले काँग्रेसले उल्लेखनीय काम गरेको र आफुहरु त्यस्को प्रचारपसारमा नलागेकोले कांग्रेसले खै के ग¥यो ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको बताउनुभयो । मिर्चैया कटारी घुर्मी हुँदै सगरमाथासम्मको हाइवे देखि लिएर सबै काग्रेसकै समयमा सुरुभएको र यस्को बाँकी काम सरकारले गर्नु पने बताउनुभयो । सरकारले यो गर्छु त्ये गर्छु मात्र भनेर भएन गरेर देखाउन पर्छ महतले भन्नुभयो ।
घुर्मी सम्मको कालोपत्रे पहिलेनै भैसक्नु पनेमा हालसम्म नहुनुमा सरकारकै कम्जोरी रहेको र यसमा सबैले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उनले भने, ! काग्रेसको काम भनेको जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरागर्नु हो त्यसैले देशलाई रेल हैन सबै गाउँगाउँमा बाह्रै महिना गाडि गुड्न सक्ने सडकको आश्यक छ , अहिलेनै रेलको आवश्यक छैन ! अब सबै गाउँहरुमा सडक पुग्नुपर्ने र भएका हाइवेहरुलाई पुनः मर्मत गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस जनजागरण उदयपुर सम्योजक तिर्थमान डङ्गोले सबै भन्दा जेठो पार्टी नेपाली कांग्रोस स्थानिय चुनाव पछि दोश्रो हुनु बिडम्बना भएको बताएकाछन । उनले पार्टिभित्रै गुठउपगुठ भएकाकारण अव एकजुट नभए नेपाली कांग्रेस कुनैपनि हालतमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै सवै एकजुट भएर उदयपुरको कल्याण गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।
60219298_2671611056191778_2033606017530462208_n.jpg (116 KB) Download
59895005_2592137474149291_5521044445983670272_n.jpg (102 KB) Download